လူလုံးမလှပြည့်သူ့ဘ၀ (သီချင်းလေးပါ) ~ ဒီမိုဝေယံ
အင်မတန်ကောင်းတဲ့ သီချင်းလေးပါ... နားထောင်ကြည့်ပါ.
ယခု တေးသီချင်းများသည် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ရရှိရေး နှင့် စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးတိုက်ဖျက်ရေး အတွက် တထောင့်တနေရာက ပါဝင်သောအားဖြင့် အမှန်တရားမြတ်နိုးသော လူငယ်များ၏ ကြိုးပမ်းမှုတစ်ရပ်သာဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှု အတွက် အားတက်စရာ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သီဆိုထားသော အဆိုရှင် သီရိမင်းလွင် နှင့် စီစဉ်သူ စန္ဒီမင်းလွင် ညီအမ နှစ်ယောက်စလုံးမှာ အသက် ၁၆ နှစ်အောက် လူငယ်လေးများဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့လေးတွေအတွက် မေတ္တာဖြင့် စာသားပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက် ရေးဖွဲ့ပေးသူမှာ ထက်အောင်ရှိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေကို လေးစားရတဲ့အချက်ကတော့ သူတို့တွေရဲ့ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကို မလိုလားဘဲ နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ လူမျိူးချစိစိတ် သက်သက်ဖြင့် အနုပညာဖြင့်နဲ့ အာဏာရှင်ကို အာခံရဲသော စိတ်ဓါတ်ပင်ဖြစ်သည်။
ရိုးသားမှု၊ ကြိုးစားမှု၊အမှန်တရား ချစ်မြတ်နိုးမှု၊ မတရားတာကို မတရားဘူးလို့ ရဲရဲဖော်ထုတ်ရဲမှု စတဲ့ အကျင့်ကောင်း စိတ်ဓါတ်ကောင်းတွေကို အရင်းပြုပီးဖန်တီးထားတဲ့ လူငယ်လေးတွေရဲ့ ဒုတိယခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ "လူလုံးမလှ ပြည်သူ့ဘဝ" တေးသီချင်းကို ခံစားဖြန့်ဝေပေးကြပါ။ ပထမ သီချင်းဖြစ်တဲ့ "ပြည်သူကို တကယ်ချစ်တာလား" သီချင်းကိုလည်းတွဲထည့်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ပထမ သီချင်းလေး ကို ဘလော့ခ်ဂါ ဒီမိုဝေယံ၊ အလင်းဆက်၊ ခမိခဆဲ တို့မှတဆင့် ဖြန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘလော့ခ်ဂါ ညီအကိုမောင်နှမများက "ယုံကြည်စရာ တကွက်မရှိပါ" ခေါင်းစဉ်ပေးပြီး တလေးတစား ဖော်ပြပေးတာကိုလည်း ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ကိုသော်ကြီးရဲ့ Video ပုံစံဖြင့် အားဖြည့်ဖန်းတီးပေးမှုကိုလည်း ကျေးဖူးတင်ပါတယ်။ အခုလို အကျင့်တူ၊ အမြင်တူသူ ညီအကို မောင်နှမ တွေလို အရာရာကို စုစုစည်းစည်း လေးလေးစားစား ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြရင် ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ မကြာခင် အောင်မြင်မှာ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
တေးရေး - ထက်အောင်ရှိုင်း
တေးဆို - သီရိမင်းလွင်
စီစဉ်သူ - ရဲမာန် (ဗွီဒီယို) မလေးရှား
(စက်တင်ဘာသံဃာတွေ စီတန်းမေတ္တာ ပို့လို့ အသေပစ်သက်ခဲ့ပါတယ်... အိုး.. စစ်သားကြီးတို့ပါကွယ်..
လူဟာလူရာဝင်အောင်အခွင့်ရေးများကိုပြလို့ ထောင်ထဲ ဖမ်းထဲ့ပါတယ်...အိုး.. ဖွတ်ကျားများလဲပါတယ်...
၈၈ ကျောင်းသားတွေလဲ အာဏာရှင် အနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်..ကျောင်းသား တို့ပေးဆက်လာသမျှ ပြည်သူတွေအစဉ်သတိရတယ်.
တရားခံဟာ ဘယ်သူလဲသိတယ် ခံစားရတာ တရားလွန်နေပြီ
လူဟာလူရာဝင်အောင်အခွင့်ရေးများကိုပြလို့ ထောင်ထဲ ဖမ်းထဲ့ပါတယ်...အိုး.. ဖွတ်ကျားများလဲပါတယ်...)၂
(လိမ်နေတာဘဲ ၄၈ နှစ်ကြာခဲ့ပြီ..)၂
ကလိမ်ဥာဏ်တွေမွေး ပြန်မြင်ယောင်သေး မြင်ယောင်မိသေး ပြည်သူများခမျာ
တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ် လူတစ်စုကြောင့် လူလုံးမလှ ပါပေါ့ရှင်....
ယခုကဲ့သို့ ပြည်သူတွေ အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲသို့ ရောက်ရှိလွယ်တဲ့သီချင်းများကို ဖန်တီး ရေးဖွဲ့သီဆိုပေးတဲ့ မလေးရှားမှ မိုးမိုးကောင်းကင်ပြာ တေးရေး - ထက်အောင်ရှိုင်း တေးဆို - သီရိမင်းလွင် စီစဉ်သူ - ရဲမာန် (ဗွီဒီယို) မလေးရှား စန္ဒီမင်းလွင် (မလေးရှား) ညီငယ်အလင်းဆက် ခမိခဆဲ နှင့် ညီငယ် ညီမငယ်များ၊ သီချင်းတွေကို ဗီဒီယိုအဖြစ် အမြဲဖန်တီးပေးနေတဲ့ အကိုကြီး ကိုသော်(ဂျပန်) တို့အား အထူးကျေးဇူးတင် လေးစားဂုဏ်ယူပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်..။
လူလုံးမလှ ပြည့်သူ့ဘ၀သီချင်း Download ရယူရန် Clickနှိပ်ပါ..
ယုံကြည်စရာတစ်စက်မှ မရှိပါ...... သီချင်း Download ရယူရန် Clickနှိပ်ပါ..